China China SAE J1772 China Manufacturer Wall-mounted EV Car Charge for Home Charging Station Ukwenziwa kunye nefektri | Itekhnoloji edibeneyo
I-SAE J1772 China Umenzi we-Wall-Mounted EV Car Charge weSitishi sokutshaja eKhaya
Ukufika okutsha kweTshayina i-China yokutshaja indawo, i-EV yokutshaja iziSeko, besinebhongo lokubonelela ngeemveliso zethu kunye nezisombululo kubo bonke abalandeli beemoto kwihlabathi liphela ngeenkonzo zethu eziguquguqukayo, ezikhawulezayo ezifanelekileyo kunye nomgangatho olawulo olungqongqo oluhlala luvunyiwe kwaye ludunyiswa abathengi.
Umgangatho olungileyo uza kuqala; inkonzo iphambili; inkampani yintsebenziswano ”yifilosofi yeshishini lethu elihlala liqwalaselwa kwaye lilandelwa ngumbutho wethu wokufika okutsha kwe-SAE J1772 China Umenzi weWall-Mount EV Car Charge weSitishi seNdawo yokuHlawula, iithagethi zethu. Silapha silindele amaqabane macala onke kwindalo esingqongileyo!
Indawo ebiyelweyo enesitayile idibanisa ngaphakathi kulwakhiwo esele ikho kwaye ikhuselwe kakuhle kwiindawo ezingaphandle. Umnatha owakhelweyo womnatha (i-LAN, i-4G, okanye iWi-Fi) ukunxibelelana nesoftware yomntu wesithathu ehambelana nesoftware. Udonga okanye ukuma okuzimeleyo kokumisa okusetyenzwa okusebenzayo ngaphakathi kwesekethe yakho ukunciphisa iindleko zokufaka. Ukuqinisekiswa okuqinisekileyo kweRFID kuvumela ukufikelela kubaqhubi be-EV.
I-4.3, i-LCD ukubonisa yonke idatha yemoto kwisikhululo sokutshaja ngexesha lokutshaja. Ngaba uyayibona imeko yentlawulo, kubandakanya nekhoyo ngoku, ombane kunye nobushushu. Izikrufu zilungile ebhokisini ukuze ungakhathazeki malunga nokuwa kwesikrini. Intambo yeemitha ezi-5 ishiya indawo eyaneleyo phakathi kwemoto yakho kunye nesikhululo sokutshaja.
Esi sikhululo sinokusebenza phantsi komjelo oqhubekayo, ukunqanda ikhefu kunye nezinye iingozi zokhuseleko ezibangelwa kukungazinzi kwangoku.
Zonke iimveliso zethu zi-ETL kunye ne-CE, umgangatho uthembekile. Iplagi esemgangathweni ye-SAE J1772 ™ ehambelana nezona zinto zombane nezihamba ngombane.
Egqithileyo I-SAE i-J1772 yetshaja yemoto yetshaja ye-32A eneSatifikethi se-ETL
Okulandelayo: Yenza iYunithi yetshaja ye-EV esemgangathweni yaseMelika yeeMoto zombane ngohlobo 1
Ixabiso leMoto yombane
Iindleko zoMbane wokutshaja
Isikhululo sokutshaja iZithuthi zombane
Amanqaku okuBiza ngokukhawuleza
EV Ukutshaja Station Wall-Onyuswe Electric Charg ...